Iholide likaMama kwi-nursergart
Ngoku uMhla woMama uqhubela phambili ngakumbi. Nangona kunjalo, akumangalisi, kuba le holide inika ithuba lokuphinde uxelele oomama bakho abathandekayo malunga nezinto ezibalulekileyo kunye nexabiso. Iziganeko zokuhlonipha uSuku loMama ziqhutyelwa ezikolweni nakwizikolo zothando. Ngoko ke, abaninzi ootitshala banemibuzo, yintoni emele ibe yimeko yeholide "Usuku loMama" kwi-kindergarten. Enyanisweni, kukho ukuhlukahluka kwezinto ezininzi, ngoko ke siza kukunika isicwangciso esiqhelekileyo sokubamba iholide likaMama kwi-kindergarten.
Ngoko, ngoMhla woMama, bonke oomama kunye nogogo kufuneka bamenywe kwi-kindergarten. Emva koko, oogogo badlala ekukhuliseni abantwana abangabalulekanga ngaphantsi koomama, kwaye ngaphandle koko, aba bafazi banomama, ngoko kufuneka bahlawule umvuzo.
Ukuthatha inxaxheba kwimibhiyozo yoSuku loMama, kukulungele ukubandakanya bonke abantwana. Ngaloo ndlela, akukho mntu uya kuziva ehluthwe, kwaye bonke oomama nogogo baya kukwazi ukuvuya ngenxa yomntwana onobuchule. Kakade ke, akubona bonke abantwana abanesakhono abanolwazi kunye nabahlakaniphile kwintsimi. Ngoko ke, zama ukusabalalisa iindima ukuze ngamnye wabo abonise ukuba uyintoni na. Iholide kufuneka idlule kakuhle kwaye ivulekele, ngoko ke kuyimfuneko ukuqala ukuhlaziya ixesha elide ngaphambi kokubhiyozela, ukwenzela ukuba abantwana bakwazi ukukhumbula iinkondlo zabo kwaye babengenamahloni. Imibhiyozo enkulisa kufuneka iqhutywe kwindawo eqhelekileyo kwigumbi lezingane, apho abayikugubha kwaye bazive bengakhululekile. Kakade ke, kukho abantwana abasensimini abasenako ukwesaba nantoni na, kodwa omnye makakhumbule abancinci.
Ubusuku bokuzonwabisa bulungele ukuqala ngegama lokubingelela kumama kunye nogogo. La mazwi athetha ngutitshala, ngubani umkhosi wexesha lokuhlwa. Uxelela ukuba ngaloo mini bonke babuthana kwi-kindergarten ukuxelela oomama kunye nogogo ukuba yiziphi izinto ezintle, abathandekayo, abathandekayo nabona bahle kwihlabathi. Yingakho abantwana belungiselela amanani ahlukeneyo, iingoma, iingqungquthela, ukhuphiswano kunye nokunye okuninzi kunomama wabo othandekayo kunye nababulenoks. Ngokuqinisekileyo, abantwana abangekho abadlali abaqeqeshiweyo, kodwa xa sizama abo sithandayo, sihlale sinetalente yangempela.
Emva kwamagama okuqala ombonisi, abantwana abaninzi banokuxelela inkondlo ngokuphathelele umama. Kungcono ukuwaphula kwiinqatyana, unike umntwana ngamnye ivesi. Ngoko abantwana baya kuba lula ukukhumbula kwaye bonke abantwana banokuthatha inxaxheba ngokuhlwa. Emva kwevesi vumela ingoma enhle malunga nomama isandi. Kuzo zonke iinkcubeko kukho iingoma ezininzi malunga nomntu ongcono kakhulu kwihlabathi, ngoko ke kufuneka ukhethe enye ekhunjulwa kakhulu ngabantwana ukuze bangalahlekanga kwaye ungakhathazeki ngako.
Emva kwamazwi kunye neengoma, umbonisi ubonisa ukuzonwabisa okuncinci kwaye athathe inxaxheba kumncintiswano. Intsingiselo yokhuphiswano kukuba oomama kunye nogogo ugqiba iingcinga kunye namazwi. Kakade, zonke zifanele zibe ngongoma kunye nangenye indlela okanye ezinye izinto ezinokukhathazeka ngamama, uthando nothando lwabo.
Emva kolu khuphiswano, unokubuyela kumidaniso kunye neengoma. Ukuba utitshala uyazi ukuba adibanise kakuhle, unako ukunikela abantwana ukuba benze i-ditties ngoomama. Ngendlela, banako ukufumana kwi-Intanethi. Kodwa ekubeni utitshala uxoxisana noomama nabantwana kwaye unokufunda into enomdla malunga nomama ngamnye, ivesi le-chastushki elinikezelwe kumntwana kamama wakhe liya kukukholisa wonke umfazi.
Emva kokuba ama-ditties aphinde aye emincintiswaneni. Ngoku unokujonga ukuba unomama owaziyo ukudala into enomdla kunye neyokuqala ngezandla zawo. Bamema ukuba benze iingubo zabo kwintombazana yabo encinci okanye iintombi ezivela eminqubeni, izikhwama okanye iinqanda. Unina uya kuphumelela, iingubo zakhe ziphendulela ukuba zona zintsusa kwaye zintle.
Ukongeza, unako ukunikela ukhuphiswano apho oomama kunye nogogo baya kunqanda iidodoli, banondle abantwana babo abathandekayo, bafune iimpazamo kwiingoma ezidumileyo kunye neenganekwane, nangaphezulu. Phakathi kweemincintiswano bavumele ukuba abantwana bayithokoze iingoma zabo kunye nemidaniso. Kwaye ekupheleni kokuhlwa, kufuneka ulungise itafile enandi.
Yintoni enokuyenza ehlobo elizweni
Umyalelo, ukulungiselela iimviwo zabafundi
Indlela yokuziphatha kunye nootitshala bomntwana?
Ukulungelelwa kwengqondo kwengane ngokufunda
Iimvula ezisixhenxe zemifuziselo yemvula yehlobo
Iidlela zokufumana i-salads kunye ne-chips
Abazali mabaqaphele: indlela yokukhetha iifomu zesikolo kumntu wokuqala
Ikhukhi nge clover
Izindlela zokucoca umzimba weesxibisi
Ieholide ezikhuselekileyo kumntwana omncinci
"Iholide yeholide": uluphi uhlobo lwehotele lokukhetha uhambo
Unokukhetha njani ibhola lebhola?
Ukutshintsha umbala wamazinyo
Indlela yokwenza ubuchopho busebenze ngokufanelekileyo
Njani kwaye nini umlingana womntwana wakhiwa
Indlela yokuziphatha kwiimeko ezinzima
I-garlic sauce nebhelo pepper